Little Green Villa: 2010
Hana Bakery 2
Posted by hana san at 5:46 PM Links to this post
Posted by hana san at 3:26 PM Links to this post
chicken rice (thai style)
Christmas Items for Sales
9 inches x 14 inches
RM 28 / USD 9
available :6pieces
Posted by hana san at 10:53 AM Links to this post
Agar Agar & peach
Posted by hana san at 12:52 PM Links to this post
Today, in my garden !
Posted by hana san at 8:07 AM Links to this post
25 th June 2010
Naing Htun Lwin: HAPPY BIRTHDAY par ma ma hana
November Moe : Happy Birthday Ma Ma Hana
Kyawt Kay Khaing :Happy Birthday Ma Ma
Tazar Aung : မနက်ဖန် မွေးနေ့ဆိုတော့ ဒီနေ့ကတည်းက မွေးနေ့ အကြို wish လုပ်လိုက်ပါတယ်
အစ်မကြီး။ အစစ အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်တော့ ထူးထူးထွေထွေ ဘာပြောရမယ်
မောင် ညီခ : မွေးနေ့မှသည် နောင်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ... စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း တို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ... သာယာပျော်ရွှင်အေးချမ်းသောဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ . . . ။
စောကြည် ဖြူ : Happy Birthday Daw Hana .....
Emma Aye :Happy Birthday Dear Mama Hana
KoMyoe ပန်းချီ-ဒီဇိုင်း ကိုမျိုး : Happy Healthy Wonderful Birthday to you Dear!
All the best wishes to you life as well...!
Aye Myat Thu : Happy Birthday sister..:)
Htain Lin Shwe Olympus : happy birthday...
Myo Aung Happy Birthday ... :)
Pyia Phyo Aung HaPpY BirthDaY :)
Kyi Cin Shwe Ma Ma.....
Nyein Chan Htwe မင်္ဂလာရှိသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မမ။ စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ပါစေ။ ပိုက်ပိုက်တွေ အများကြီးရပါစေ။ စာကောင်းပေကောင်းတွေ ပိုမိုဖတ်ရှုရေးသားနိုင်ပါစေ။ (အရေးကြီးဆုံး ဆုတောင်းက အခုမှ လာမှာ :D) ... အိုဒီအက်ဖ်အတွက် ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားနိုင်ပါစေဗျာ ...
အမေ့သား ဘဂျမ်း Happy birthday sis !
Ko Phyoe Happy Birthday Nyi Ma Lay
နှင်း ဦး ပွင့် ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေနော်မမ...
မမလိုချင်တာတွေ.. ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ..လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေနော်...
ချစ်ညီမ ခြူးခြူး ^_^
Ma Chel Happy Birthday sis :D
Khin Thuzar Thin Happy Birthday. :)
May Mon Myat Zaw Happy Birthday :)
Linn Zaw Win Happy Birthday... :)
Lu Mg happy birthday ...ma pann
Naing Kyaw .h.a.P.p.Y...b.i.R.t.h.d.A.y...m.A...m.A...h.A.n.A...a.L.L...t.H.e...b.e.S.t...:-)
Myo Han Htun Happy Birthday :)
Win Thiri Kyaw Happy Birthday, mama :) May you always be happy, healthy and wealthy :*
Cindy Kao ချစ်မမ ..Wishing UaVery Great Happy Birthday ပါ :)
Pyay Khaing Happy BD par ma ma ha na sa :)
Min Lwin Oo Happy birthday to you Ma Hana......
Ingjin Thant Sis, Very Happy Birthday!!! Wishing you all the best.....
Zar Cho Lei Happy Birthday sis..
စာမျက်နှာ ၁၅ happy birthday to u...all da best... :)
Seint Sann Zaw Happy Birthday Sis...
Mi Mi Hnaung Hippo Birdy to you...Hippo Birdy to you...Hippo Birdy little Hana... Hippo Birdy to you.... =)
Yee Mon မမဟန, "Happy Birthday "
Poe Thar ဖိုးသား Happy bday.
Phoe Thu Taw ဟက်ပီးဘက်သ်ဒေးမဟနစံ.... ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သာယာပါစေဗျ.....။
Nang Hong Shan Happy Birthday ပါညီမလေးဟန......
Atta Kyaw ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပြီး လိုရာဆန္ဒများ တလုံးတ၀တည်း ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Atur Kiri Ingti Happy Birthday.
Than Htun Linn
Happy birthday sister !!! :)
Aung Myat Thu Happy birthday fri)))
Thiha Kyaw Happy Birthday!
Shwun Mi Happy Birthday ပါ မမဟနး)
Aung Moe Win Happy Birthday!!! May your days be bright and shine ahead.
Yuki Ko မွေးနေ.မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မး)
Khinlayshwe 尹可卿 Happy Birthday
Kyaw Thu Happy birthday Ma Hana!!
Min Zin Oo Happy Birthday!
အမေ့အိမ်ရဲ့ ဆည်းလည်းလေး happy birthdayama! :
Lin Let Kyal Sin Happy Birthday, Ma Ma !! Wishing you good health, success, peace, love, joy & happiness on your special day and all year through ... Best wishes to you :)
Win Pa Pa Ko Happy Birthday to you ... :)
Kmm Zaw ၀မ်းတွင်း Happy Birthday မဟန!!
Phyu Phyu Thant Happy birthday,Hana! Wish you haveawonderful day with family and many more happy years ahead!
Alex Ko Aung Happy Birthday and All the BEST...
Aye Kyawt Khaing Happy birthday ....
Khin Sabel PhyuံHappy birthday toooo youu...Happyyyy birthday..Happy birthday..Happy birthday..
ma ma Hana.. :) may all your dreams come true.. long live..happy life..
Minn Htet happy Birthday & all the best ...
Aye Chan Maungံပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ...
Ingyin Flower Happy Birthday mama
May all ur dreams come true to you :)
NML Ingyin ^_^
Hpoe Thar happy birthday ပါအမကြီး..
April ဧပရယ်လ် to မဟန >>>> Happy Birthday! Hope your birthday is just the beginning ofayear full of happiness.
ခနွဲ- ခနွဲ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
Ye Lin Kyaw Happy birthday Ama Hana!
Nay Chi Win Happy Birthday Ma Ma Hana
Phyu Phyu Thi မ ရေ... ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ကောင်းကျိူးလိုရာ ပြည့်စုံပါစေ ..Mwah ... :* ;)
သားလိမ္မာ မောင်စိုင်း Happy Birthday Ma Hana! :)
Thyu Naung H@PPY BIRTHD@Y...
Thidar Aye Happy Birthday..ama.. Wish you all the best in your whole life !!!
စွိ စွိ Happy Birthday Ama.
Muyar Htun Happy Birthday ma ma :*
မောင် ပြုံး Happy Birthday T T :)))
Pinkgold ပင့်ဂိုးလ် Happy Birthday Chit Ma :)
Angel Phyo Happy Birthday Ma !!!!
Thwe Thwe Aye Happy Birthday !!!! Ma Hana !!!!!
PyePhyo Han Happy Birthday Sister :)
ဂျစ်တူး Jittuu Happy Birthday to you, Ma Ma Hana :D
Mu Nwet Khint Zaw ပျော်၇ွှင်သော မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ချစ်အမ။ ရည်မှန်းချက်တိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး အေးချမ်းသာယာတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ကြုံတွေ့ရပါစေနော်။
Myo Kyaw Htun Happy Birthday ma H
Thiri Lay Happy Birthday sis :)
Hein Htet happy bd sis
Wunna Swe Hapi Bathday Ma Hana !!!
Wish ya all de best....
Saddha San .
မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းစုံပြည့် ကောင်းမြတ်သောမွေးနေ့ပါ မဟန ...
Yin Thu Thu Happy Birthday ma ma ..:)
Win Lae လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ အားလုံးပြည့်ဝပြီး ပျော်ရွှင်စရာအတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပါစေ ...
Pandora ပန်ဒိုရာ ပျော်စရာ ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ :)
ပန်း ခက် HAPPY BIRTHDAY SIS!!!
Friday Born Happy Birthday Ma Ha Na :)
Valentino ကိုမိုးသဲ Happy BD Hana!
Thet Htar Happy Birthday...... Chit Ma!!!!
Kyaw Kyaw Htun Happy Birthday!!!
Myo Tha Htet Happy Birthday! I wish you have more successful and happier life.
Chit Thiri Maung Happy birthday sis.. ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ..မမ..
July- Nyanlinn Happy Birthday " HanaSan " !!
Niko Alex 赵富安 Happy Birthday
Thiha Thein Happy Birthday!!!
Hnin Nu Happy birthday mama ... wish u alldbest
Cuai Lung Happy Birthday...
Khin Myat Happy Birthday ma hana
Hteik Tin Aung ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပွဲကို မိသားစုနဲ့ အတူ အမြဲ ကျင်းပနိုင်ပါစေ မဟန .
Thurein HtunံHappy Birthday Fri
မိုး Ma Ma Lwin chit mama...Happy Birthday...အလိုဆန္ဒတိုင်း စိတ်ကျေနပ်စွာ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေ...
မောင်လှ MgHla Happy Birthday Sis
Thet Thet Hlaing Khant HAPPY BIRTHDAY MY DEAR PRETTY SIS...............;D
M Mimi Lei Dear mama...
HAPPY HEALTHY BIRTHDAY..
Many similar returns with your loved ones!!...
May you haveagreat fulfilling prosperous healthy and peaceful year ahead...
with metta and hugs.. sis mimi
Tote Kyi အသက်တနှစ် ကြီးသွားပြန်ပကွဲ့နော်
Pho Nyan့ happy birtday !!!
Cynthia Hlaing Happy Birthday, Ma Ma Hana! ♥ ♥ ♥!
Myo Win Yee Happy BD sis! Wish you have all the best more than now. :)
Thant Zaw မရမကကြံလို့ ၊ ခဏခဏဟန်တဲ့ - ဟနစံ ရဲ့ ဒီနေ့မွေးနေ့မှာ ဘဝအလှတွေ ကျန်ရစ်ပါစေသတည်း .........
Wai Phyo Aung Happy Birthday!!
Lan Meiying Tin Marlar Happy B'Day Ma Hana!
Nyein Nyein Pyae Happy Birthday to you , Ma Hana !
May you get everything which you wishes in your life !
May Hnin မမဟန(လေး)ရေ . . . မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Thar Htet မင်္ဂလာပါ အစ်မကြီးရေ။ အသက်လည်း တစ်နှစ်ကြီးလာပြန်ပြီဗျ နော။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ပါစေဗျား။
Khant Kywe Soe မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မဟန... :)
Kyaw Zay Ya happy birthday sis........
Sai Myo Happy Birthday, ဒေါ်လေး!
Shwe Yee Win Lei May your wishes come true!
Andru Foo Happy birthday!Cheers!
Khaing Khaing Nyein May you be crowned with Success, Happiness & Healthiest..Ma Hana :)
Wai Lin Tun မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ မမဟန
Nang Nyi ဟက်ပီးရယ်တဲ့မှ ဘာ့သ်ဒေး မဟနး)
Thar Oo Happy B'day bar ma Hana !!!
Chu Chu S Happy Birthday,MaMa...
Myo Thet Paing ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ အမဟန...။ ဘတ်ဒေးမှာ များများဘတ်... အဲ့လေ... များများပျော်နိုင်ပါစေ..။ :D
Htoo Myatွှွှကြီးတော်ဖုရား ဟန၏ မွေးနေ့အခါတော်ကို လူကိုယ်တိုင် ကြွရောက် အခစား မဝင်နိုင်သည့်အတွက် တူတော်မောင်အား ခွင့်လွှတ်ပါရန်နှင့်၊ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သ၀ဏ်လွှာကိုသာ ပေးပို့လိုက်ပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြောင့် သက်တော်ရာကျော် ရှည်စေသတည်း။
Lain Laine ဟက်ပီးဘတ်ဒေး နော် မကြီး..... နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မကြီးပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ နေနိုင်ပါစေ။ :):):)
Khaing Su Monှမွေးနေ့ မှစ နေ့ တိုင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ မမပာန :)
ThuWon Theko happy birthday sis......you are the only one who wished to my last birthday at FB....
i never forget you & your birthday to wish...:D
Htoo Tay Zar Happy Birthday to You Sister!! မွေးနေ့တူ အမ =D
Ricky Goh Happy Birthday To U ~~~~~^^
Nang Mya Sandar Maung Happy Birthday ma ma Hana.All the best.............
ဇို ဇို Happy Birthday Sis hana !!!!!
Aye Sandar Khaing
Nice to meet you! , Ma Hana. Happy Birthday to you
May Nyane ညီမလေး မွေးနေ့များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ.. (ဆုတောင်းတည်းတည်း နောက်ကျပေမဲ့ မေတ္တာတရားကတော့ နောက်မကျပါ) :)
ဂွမ်း ပုံ Happy Birthday !!!
Thet Hsu Pyae ma ma gyi... happy birthday...alote tway shoke nay lo khu mha pel online tat phit tot tel ma ma gyi yel...pyaw shwin mhu paung myar swar pine sine ng par say nor ma ma gyi
Han Zaw ပျော်ရွှင်ပွဲ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ။
Hlaing Myint Happy birthday to u.ur dreams come true!!!!
ပီး ကြုံ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်မွေးနေ့ ရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေ မမရေ... နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မမချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရင်း မမလုပ်ချင်တဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ဆထက်တပိုးလုပ်နိုင်ပါစေ... ပြီးတော့ မီးတို့ အပျိုကြီးဂိုဏ်းရဲ့မမဥက္ကဌနေရာကိုလဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေနော် (ဟိဟိ... စတာ... ;D)
Kyi Soe happy birthday ပါ မဟနစံ...
Soe Zeya Tun Happy Birthday ပါ ......
Thida Win Ko Ko Happy Birthday Ma Hana!!!
Khin Min Zaw မင်္ဂလာမွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ စိတ်ရဲ့ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ရဲ့ ကျန်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံပါစေ။
မမ နောက်ကျတာ ခွင့်လွှတ်နော်...
Esther Lee happy birthday `
Nang Aye Happy birthday :)
Ko KoYe မွေးနေ့တဲ့လား တောင်းနေကျ ဆုတစ်ခုရှိတယ်
ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်နေတာ တထပ်ထဲ ကျပါစေဗျာ......
Ye' Paing Phyo
နောက်ကျတဲ့ ဆုတောင်ပါ ... ကိုရဲပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ လို့ ဟိဟိ
Zaw Lynn Dwe မွေးနေ့ဆို၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ။
Caroline Myat Oo I hope all your birthday dreams and wishes come true!!!! Happy Birthday sister lay..
Myo Min Tun Happy Birthday!
မီးလာတာရယ်၊ အင်တာနက်ရတာရယ်၊ ပြန်ရောက်နေတာရယ် ကြောင့် ဆုတောင်းပေးလိုက်နိုင်ပါကြောင်း
Lin M Oo happy happy birthday , ma gyi !!
Dexter Ng Happy Birthday ! Hana Sis~
Be the best of the best !
Get whatever you wish for !
Tun Min Soe ညီမလေး မွေးနေ့မွေးရက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများဖြင့် ကိုယ်လုပ်ချင်သော အလုပ်ပေါင်းများစွာကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ လုပ်နိုင်ပါစေသတည်း
Mg Ba Oo မင်္ဂလာရှိသောနေ့များဖြစ်ပါစေဗျာ ....
Thet Khine မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ... မမဟန
Su Kyi Happy birthday MaHana! :)
ရင်ခွင် Lay မွေးနေ့ မှာ ချည်းပဲမဟုတ်ဘူး .. ဘယ်အချိန်မှာမဆို လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့် ဝပါစေလို့ မွေးနေ့ ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ် အမ ....
Lwin Moe hello, happy birthday!
Phuei PhoungံHappy Birth Yesterday Ma Ma Hana :) သူများတွေ ဆုတောင်းပြီး နောက်ဆုံးမှ ဆုတောင်းပေးလို့ ချိတ်ချိုးနဲ့နော် ... မနေ့ကမွေးနေ့မှသည် မမဟန စိတ်အလိုရှိတိုင်း ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီး ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာနဲ့ နိဗ္ဗာန် မဂ်ဖိုလ်ကို ရက်တိုတို ဘ၀တိုတိုနဲ့ ရလွယ် ရောက်လွယ်ပါစေနော်....
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ ဖြစ်စေကြောင်းပါ မဟန ခင်ဗျား...။
~~~ Happy Birthday to u Hana... Many happy returns of the day... May god bless u.. Besh Wishes.. ~~~
Happy Birthday, Ma Hana!
Posted by hana san at 11:02 AM Links to this post
Posted by hana san at 11:27 AM Links to this post
Posted by hana san at 11:22 AM Links to this post
myat lay jasmine
Posted by hana san at 10:52 AM Links to this post
for image, credit goes to http://chris4tiger.wordpress.com
Soapy water sphere
Last only forafew moments
Yet , eventually it bursts
It really existed
But who would believe that
Stabilizing the babble
It is always horrible
Between points and edges
Yes, they solve for ages
Surface tension increases
as surface concentration decreases
In the case of “tears of wine” *
* Marangoni effect
(14th June 2010
Posted by hana san at 8:35 PM Links to this post
“One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)” isanonpolitical, nonprofit public organization and is not organized for the private gain for any person but for public and charitable purposes.
It is initiated and founded on 16 February 2010.
ODF Myanmar is founded byagroup of Myanmar, in which they expect to operate like supporting organizations for charity works in Myanmar.
ODF Myanmar is dedicated to improving the quality of life , education and health of poor and orphan.
We believe that every individual counts from all of helping hands would benefit from beingapart of ODF Myanmar.
Our aim is to reach out to as many people as possible and change their lives for the better, ensuring they haveachance at life opportunities.
We believe that all the poor should be given an equal opportunity of basic needs such as food, shelter , health care and education.
ODF Myanmar believes that if each member of our ODF Myanmar donates at least one dollar monthly, our individual donations can be merged intoagreater fund. When we combine our interest and strength, we can make sure that our fund goes to the needy organization of our Myanmar family. Our goal is to build up the trustworthy foundation and enhance the better relationship among members.
Posted by hana san at 12:06 PM Links to this post
sea shore flowers
Posted by hana san at 11:23 AM Links to this post
Posted by hana san at 11:10 AM Links to this post